Kwaphela isikhathi eside abantu sikhule ngefilakisi. Imbewu, okuyinto izinzuzo zezempilo Bekulokhu kucatshangwa ukuthi kubaluleke, wayevame ukusebenzisa abantu abaphulukisi. Lo mkhiqizo wemvelo ukhonza ukuqeda izifo eziningi. Futhi manje kukhona umqondo ogcwele kubantu wokuthi isintu kulesi superfood kuyinto ngefilakisi. Imbewu, ukusetshenziswa okuyinto lufakazelwa isayensi, Ziningi izimfanelo ezinhle. Ukusebenzisa kwabo kunciphisa ingozi yesifo semithambo futhi inhliziyo, ekuvimbeleni ukukhumuzeka sikashukela kanye Oncology.
Tiny flaxseed kuhlanganisa e ngezithako zawo eziningi izakhi ezahlukene. Nokho, izici umkhiqizo wabonga ukuba izingxenye ezintathu. Eyokuqala yalezi iyona Omega-3. Ngo inani elincane elilingana isipuni, kuyinto 1.8 amagremu amafutha anempilo. Iqembu phytonutrients ngokuthi "lignans" iqukethe ngefilakisi. Imbewu, ukusetshenziswa okuyinto lihlotshaniswa ukuthi ingxenye, kakhulu igugu imithi. Uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo ye lignans kuzo ngaphezulu izikhathi 75-80.
imbewu yefilakisi aqukethe omunye umuntu impilo kwizifundo obalulekile. Them fibre. Futhi umkhiqizo zemifino iqukethe kokubili ezinhlobo yayo: encibilikayo futhi zingaxazululeki. Ifomu yokuqala fibre, isisu zingavuvukalanga, ikhuthaza kokubhujiswa kwalo okusheshayo. Nokho, libonisa umzimba cholesterol okweqile kanye Bile acid emathunjini. Ngesikhathi esifanayo fibre encibilikayo (noma, njengoba zibizwa kanjalo, pectin) Singase sibe matasa yenqwaba liquid ube mass jelly-like esiswini. Lokhu kukuvumela ukuba nomuzwa ekuseni ekugcwaleni. Ngaphezu kwalokho, pectin ubonisa umzimba ngokweqile cholesterol kanye Bile acid ngokugwema Ukungena zabo lingene egazini.
Zihlukahlukene imiphumela ezuzisayo empilweni yomuntu kuyinto ngefilakisi. Imbewu, ukusetshenziswa okuyinto uthola isicelo sokuba ukususwa izifo ezihlukahlukene, asetshenziswa ezindaweni eziningi imithi. Futhi kuzo zonke izindawo kwalo mkhiqizo kuyaphumelela kakhulu.
Kunconywe for the nokuvinjelwa umdlavuza yefilakisi imbewu. Benefit (isicelo isitshalo kusho kulokhu kusekelwe isenzo bathole ezinye zezici zalo ezimbili ezinkulu) kuyiqiniso ikakhulu umdlavuza colon, wendlala nomdlavuza wamabele. Omega-3 futhi lignans ekhona flaxseed, ukuvimbela umdlavuza avele sikhule futhi ukusabalala.
Siza nemithi engamakhambi ekwelapheni izifo izitsha inhliziyo negazi. Lokhu kungenzeka ngenxa ikhono flaxseed omkhulu ekulweni ukuvuvukala, ukunciphisa amazinga cholesterol, ukubuyisela ukugeleza kwegazi emzimbeni futhi kujwayeleke inhliziyo isigqi.
A engayitholi nsuku zonke lignans kuzole amazinga kashukela egazini. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa flaxseed ekubhekaneni nesifo sikashukela. Lignans, futhi i-omega-3 compounds aphumelela ngokumelene ukuvuvukala e pathologies njengesifuba somoya kanye Parkinson.
Izinzuzo yefilakisi imbewu kwabesifazane itholakala ikhono lazo ukunciphisa umfutho komzimba. Kwanele kabili ngosuku ukudla ezimbili wezipuni yemifino umkhiqizo okunempilo. A yi omuhle kufinyelelwa emavikini amabili.
Iseluleko esibi: indlela sigule imizuzu 5?